China OEM Volomaso Volomaso Volomaso malefaka voajanahary voajanahary mitady pensilihazo misy loko 3 miaraka amin'ny orinasa borosy sy mpanamboatra | Jinfuya
Pensily malefaka OEM Volomaso malefaka voajanahary mineraly mitady pensilihazo misy loko 3 miaraka amin'ny borosy
Fa maninona no ilaintsika pensilihazo volomaso?
Ny volomaso dia faritra misy volo fohy eo ambonin'ny maso izay manaraka ny endrik'ilay sisiny ambany amin'ny zorony misy biby mampinono sasany. Ny asany lehibe indrindra dia ny fisorohana ny hatsembohana, rano, ary potipoti-javatra hafa tsy hianjera ao amin'ny mason'ny mason'izy ireo, fa izy ireo koa dia manan-danja amin'ny fifandraisan'ny olombelona sy ny endrika tarehin'ny olona. Matetika ny olona dia manova ny volomaso amin'ny alàlan'ny fanesorana volo sy makiazy.
Mila pensilihazo ianao raha te hampamirapiratra ny volomasonao, fenoy ny banga eo anelanelan'ny volony na ahitsiho ny endrik'izy ireo. Hanome volomaso ny volomaso ny aloka. Fa mba hampandefasana volo maditra dia mila mampiasa gel fanampiny ianao. Raha manana endrika tonga lafatra ny volomaso anao dia ampiasao pensilihazo na aloky ny maso fotsiny.
Item No. 4030-1
Loko Brown, Mainty, Volontany antonony
Mety amin'ny Ny karazan-koditra rehetra, azafady mba ampifanaraho amin'ny lokon'ny volonao raha te hanapa-kevitra ny alokaloka penily volomaso tokony hofidinao.
Atiny Net 1g
asa Makiazy hatsaran-tarehy eo amin'ny volomaso
Mampanantena isika vegan ary 100% maimaim-poana amin'ny CRUELTY
FIVORIANA - Tsy mora mihena, tsy tantera-drano, tsy misy hatsembohana, voaporofo mandritra ny fotoana maharitra.
Mora ny mampihatra - lohan'olom-bolo efatra tsy manam-paharoa, alao sary an-tsaina ny volon'ilay volomaso ary tohizo ny lokony ao anaty miaraka amin'ny endrika volomaso izay nataonao dingana farany hamoronana ilay volomaso mazava sy voajanahary.
SMUDGE-PROOF - Mora ny manintona volomaso mahatsapa stereo milamina sy manankarena, manaporofo fa tsy miova endrika, ataovy bika foana ny volomaso mandritra ny tontolo andro. Mora sy haingana hanala makiazy.
FAMPIASANA - Hatsarao ny volomasoo amin'ny alàlan'ny famenoana banga mba hamoronana endrika volomaso voajanahary voajanahary ho an'ny zana-kazo voafaritra tsara.
Maharitra - Ny raikipohy maharitra dia manome antoka fa haharitra tontolo andro ny makiazinao nefa tsy mandoto na miala amin'ny hatsembohana, orana ary na fanatanjahan-tena amin'ny rano aza.
NY Pensily volomaso mandeha ho azy miaraka amin'ny borosy dia novolavolaina hanampiana anao hamorona volomaso toa tsy misy pentina sy voajanahary.
Ny famolavolana refill triangular namboarina manokana dia manampy amin'ny famolavolana tsipika mora eo amin'ny alisinao, milamina tsy misy caking ny firafitra, mivondrona voajanahary mba hamorona volomaso tsara tarehy izay mametaka tsara ny endrikao amin'ny endrika makiazy rehetra.
Ny volomasonao dia ho feno kokoa, voadio sy voafaritra kokoa.
Mora tokoa ny mampihatra, mahatonga azy io ho tonga lafatra ho an'ny vao manomboka na ho an'ny matihanina. Ny penina volomaso dia miroraka tsara manome loko tsara tarehy izay maharitra tontolo andro.
#Tsy misosasosa / #Tsy mihena / # Mora ampiharina / # Mora esorina
# Tsy tantera-drano / # maharitra maharitra / # fijery voajanahary
Ahoana ny fampiasana ny mandeha ho azy Pensily volomaso handrafitra endrika volomaso lavorary?
Ny pensilihazo volomaso misy antsika dia tsy misy rano sy porofon'ny hatsembohana, saingy malefaka io ahafahanao manala azy mora foana amin'ny alàlan'ny pad remover na rano fanesorana makiazy
Teo aloha: Wholesale Silky Liquid Foundation 8 miloko tsy misy lanjany 30ml miaraka amina volon-koditra voajanahary sy Formula Moisturizing
Manaraka: Mpanatsara ny volomaso marika manokana Fandraisana akora voajanahary fitomboan'ny fitomboan'ny sakafo mahavelona
Pensily volomaso mandeha ho azy